Amụma nzuzo - BikeHike
Akụkụ ederede: Adreesị webụsaịtị anyị bụ: https://bikehike.org.
Akụkụ ederede: Mgbe ndị ọbịa na-ahapụ ihe na saịtị ahụ anyị na-anakọta data dị na ụdị akwụkwọ ahụ, na adreesị IP na onye na-ahụ maka njikwa ihe nchọgharị iji nyere aka nchọpụta spam.
Akụkụ ederede: Ọ bụrụ na ị bulite ihe oyiyi na ebe nrụọrụ weebụ, ị kwesịrị izere ịdebe ihe oyiyi na data ebe ejiri etinye (EXIF GPS) gụnyere. Ndị nleta na weebụsaịtị nwere ike ibudata ma wepụ data ọ bụla site na ihe oyiyi na weebụsaịtị.
Akụkụ ederede: Ọ bụrụ na ịhapụ okwu na saịtị anyị ị nwere ike ịpụ na ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e na ebe nrụọrụ weebụ na kuki. Ihe ndị a bụ maka mma gị ka i wee ghara ịgbanye nkọwa gị mgbe ị na-ahapụ okwu ọzọ. Kuki ndị a ga-adịru otu afọ.
Akụkụ ederede: Ihe ndị dị na saịtị a nwere ike ịgụnye ọdịnaya agbakwunyere (dika vidiyo, ihe oyiyi, isiokwu, wdg). Inye ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-akpa àgwà kpọmkwem dị ka ma ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ gara na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ.
Akụkụ ederede: Ọ bụrụ na ị rịọ maka nrụpụta paswọọdụ, adreesị IP gị ga-esonye na email nrụpụta.
Akụkụ ederede: Ọ bụrụ na ịhapụ okwu, a na-edebe okwu na metadata ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ na anyị nwere ike ịchọta ma kwado ihe ọ bụla na-esonụ na-ekwu na-akpaghị aka kama ijide ha n'ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị ekwesị.
Akụkụ ederede: Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a, ma ọ bụ nwere ihe ị ga-aza, ị nwere ike ịrịọ ka ịnweta faịlụ exported nke data onwe onye anyị jidere gbasara gị, tinyere data ọ bụla ị nyere anyị. I nwekwara ike ịrịọ ka anyị wepụ data ọ bụla anyị nwere banyere gị. Nke a anaghị agụnye data ọ bụla anyị ga-edebe maka nhazi, iwu, ma ọ bụ nzube nche.
Akụkụ ederede: Enwere ike ịchọta ihe ndị nleta site na ọrụ ọrụ nchọpụta spam.